होमपेज / नागरिक शनिबार / जसले मौलिक ज्योतिष ग्रन्थ पत्ता लगाए
जसले मौलिक ज्योतिष ग्रन्थ पत्ता लगाए	18 Aug 2013 आइतबार २ भाद्र, २०७०
जगमान गुरुङ	Be the first to comment! 12345 (0 votes)
म विसं २०३५ फागुनमा पृथ्वीनारायण क्याम्पस, पोखराबाट नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्र काठमाडौंमा सरुवा भएर आएँ । म पोखरामा छँदा नै गुरु पण्डित नयराज पन्तका चेला भोलानाथ पौडेलका छोरा सामनाथबाट इतिहास संशोधन मण्डल र नयराज गुरुबारे थाहा पाइसकेको थिएँ । म काठमाडौं आएपछि नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रका तात्कालिक कार्यकारी निर्देशक प्रा. डोरबहादुर विष्टज्यूले मलाई धनबज्र बज्राचार्यज्यूको निर्देशनमा रहेर अनुसन्धानात्मक काम गराउनुभयो । नेपाल र एसियाली अनुसन्धान केन्द्रमा नै प्राज्ञ ज्ञानमणि नेपालज्यूसँग मेरो परिचय भयो । त्यसपछि नयराज गुरुबारे धेरै कुरा जान्नबुझ्न पाएँ ।म ओटु, सबलबहालमा उहाँलाई भेट्न गएँ । उहाँका जेठा छोरा महेशराज पन्तले संस्कृत भाषा बोलेर मेरो विषयमा कुरा गर्नुभएको मलाई असाध्यै रमाइलो र मिठो लाग्यो ।विसं २०३६ वैशाखमा वीरगन्जको पिपरामठमा विश्व हिन्दु सम्मेलनको आयोजना गरिएको थियो । वाल्मीकि विद्यापीठका प्राध्यापकहरूसँग म पनि विश्व हिन्दु सम्मेलनमा भाग लिन वीरगन्ज गएँ । त्यही बेला नायब बडागुरुज्यू माधव भट्टराई र नयराज गुरुका कान्छा छोरा दिनेशराज पन्तसँग मेरो परिचय भयो । उहाँहरू दुईजनासँगको मेरो संगत अहिले पनि प्रगाढ छ । र, अझै पनि प्रगाढ नै रहिरहनेछ ।त्यसपछि नयराज गुरु नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठान, प्राज्ञ परिषद्को सदस्य हुनुभयो । त्यसबेला प्रत्येक प्राज्ञ सदस्यले तीन–तीन महिनामा आ–आफ्नो विषयमा प्रवचन दिने चलन थियो । म नयराज गुरुको प्रवचन बडो चाख राखेर सुन्न जान्थेँ । मैले नेपाली इतिहास, संस्कृति र पुरातत्व विषयको एमए परीक्षामा नेपालको एकीकरणमा गुरुङहरूको भूमिका विषयमा शोधपत्र लेखेको थिएँ । मेरो उक्त शोधपत्र तत्काल पुस्तकका रूपमा प्रकाशित भयो । पुस्तक प्रकाशित भएपछि म गुरुलाई पुस्तक चढाउन नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा गएँ ।उहाँले 'पुस्तकको कुनै पाना पल्टाएर पढ्नुहोस्' भन्नुभयो । मैले पुस्तकको एउटा पाना पल्टाएर पढेँ । काजी नरसिंह गुरुङ सम्बन्धी उल्लेख भएको पाना रहेछ । त्यसपछि उहाँले मुसुक्क हाँसेर 'ठिक हो' भन्नुभयो ।उहाँले अहिले ठमेल, त्रिदेवी मार्गमा रहेका तीनवटा देवल भएको जग्गा काजी नरसिंह गुरुङको हो भन्नुभयो । काजी नरसिंह गुरुङको खायल काजी अमरसिंह थापाले पाएपछि त्यस जग्गामा काजी अमरसिंहले ती तीन मन्दिर बनाएका हुन् ।नयराज गुरुको जीवनी र आदर्शबाट आज हामीले धेरै कुरा सिक्न सक्नुपर्छ । उहाँका कृतिमा मलाई 'लिच्छवि सम्बत्को निर्णय' शीर्षक पुस्तक अतिप्रिय लाग्छ, किनभने म पनि ज्योतिषशास्त्रमा केही चासो राख्छु । यो पुस्तकलाई शिर–पुछारसम्म छिचोलेर पढ्न सक्ने शक्ति र सामथ्र्य मसँग छैन । तापनि यो पुस्तक ज्योतिष जगतका विज्ञ एवं जिज्ञासुहरूका लागि अतिउपयोगी छ ।आद्य जगतगुरु शंकराचार्यले वेदान्त दर्शनको सिद्धान्तलाई आधा श्लोकमा टुंग्याइदिनुभएको छ । जस्तै–श्लोकाद्र्धेन प्रवक्ष्यामि यदुक्तं ग्रन्थकोटिभिः ।ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः ।।यसैगरी नयराज गुरुले ज्योतिषशास्त्रको सायन एवं निरयण सिद्धान्तलाई दुइटा वाक्यमा अथ्र्याइदिनुभएको छ । उहाँका अनुसार आकासमा रहेका ग्रहहरूको अवस्थिति तथा आकासका ग्रहहरूको घटनासँग प्रत्यक्ष मिलेका संक्रान्ति सायनसंक्रान्ति र त्यस सम्बन्धमा ज्योतिषीहरूले गरेका गणना अर्थात् ग्रन्थबाट गणना गरेर ल्याइएका संक्रान्ति निरयणसंक्रान्ति हुन् । आजकाल सायन एवं निरयण अर्थात् आकासको ग्रह परिस्थिति र त्यस सम्बन्धमा ज्योतिषीहरूले गरेका गणनाको बीचमा २३–२४ दिनको अन्तर पर्दछ । अतः सायन र निरयण सिद्धान्तलाई ज्योतिष जगतले एउटा समस्याको रूपमा लिएको छ ।यसका अतिरिक्त उहाँले यही सायन र निरयणकै आधारमा सुमतितन्त्रलाई विसं ६३३ देखि विसं ९३७ भित्रको कुनै समयमा नेपालमा रचना गरिएको मौलिक ज्योतिष ग्रन्थ हो भनेर प्रमाणित गरिदिनुभएको छ । यसरी नयराज गुरुको अथक प्रयासबाट एउटा नेपाली मौलिक ज्योतिष ग्रन्थको पत्ता लागेको छ ।यसैगरी, उहाँले कालचक्रतन्त्रको विमलप्रभाटीकामा पनि अध्ययन गर्नुभएको छ । कालचक्रतन्त्र एउटा महŒवपूर्ण बौद्ध ग्रन्थ हो । कालचक्रतन्त्रमा ज्योतिषशास्त्रको पनि विवेचना गरिएको छ । कालचक्रतन्त्र मूल ग्रन्थ हो र विमलप्रभाचाहिँ यसको टीका हो । इसं १०२७ मा कश्मिरी पण्डित सोमनाथले तिब्बती भाषामा कालचक्रतन्त्रको अनुवाद गरेका थिए । त्यही समयदेखि तिब्बती ज्योतिषशास्त्रमा भारतीय ज्योतिषशास्त्रले प्रवेश पाई चिनियाँ ज्योतिषशास्त्र र भारतीय ज्योतिषशास्त्रको समन्वयबाट तिब्बती ज्योतिषशास्त्रको विकास भएको थियो ।यसरी नयराज गुरुले इतिहासका अतिरिक्त ज्योतिष जगतमा अभूतपूर्व निर्णायक योगदान दिनुभएको छ । अतः उहाँ एउटा युगपुरुष तथा मूर्धन्य व्यक्तित्व हुनुहुन्छ ।(लेखक नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालय, राष्ट्रिय सांस्कृतिक अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।) Tweet Leaveacomment Message *
मेसी हुनुको दबाबरोसारीयोमा उनी जन्मेको घर सुनसान छ। त्यहाँ अहिले कोही पनि बस्दैनन्। अहिले पनि उक्त घर मेसीकै परिवारको नाममा छ। उनका छिमेकी जो त्यहाँ ४० वर्ष देखि बसिरहेका छन्, उनीहरु मेसी...	हात्तीमय सौराहासौराहा र हात्ती एक अर्काका परिपुरक हुन्। चितवनको सौराहा आउनेहरू हात्ती चढ्छन्, जंगल घुम्छन्। जंगलमा पाइने दुर्लभ वन्यजन्तु एकसिंगे गैंडा हेर्न हात्तीमाथि नचढी सुखै छैन। सौराहाको मुख्य आकर्षण हात्ती सफारी...	अन्तर्द्वन्द्व'तपाईं यो बच्चाकी आमा?'एउटा नियमित प्रश्न। कसैसँग केही अन्तरंग हुँदा एक वा दुई संवाद साट्नेबित्तिकै ममाथि आइपर्ने प्रश्न। यस्तो प्रश्न– अलिकति स्पष्टीकरणको मौकाका लागि मिठास अनुभव गर्दछु भने उतिखेरै त्यो...	तीन मेलमेल १मेरी प्यारी,हक नभए पनि यो सम्बन्धले तिमीलाई सम्बोधन गरेँ है। ठिक हो कि होइन यसो गर्नु, थाहा छैन। तर आज म आफ्ना भावनालाई कसैले तोकिदिएको ठिक वा बेठिकको कसीमा...	गुफाभित्र देवतै देवताघुर्मिबाट हलेसी जाँदा जयरामघाटमा दुधकोशी नदी तर्नु पर्छ। घाट वारी ओखलढुँगा पर्छ भने पारी खोटाङ। नदीमा बेलिब्रिज छ जुन बर्खामा झिकिन्छ। घाटबाट ३२ किलोमिटरमा हलेसी महादेव। वर्सेनी हजारौं तिर्थालु हलेसी...	आफू त परियो गोतामे!नयाँ सडकको पीपलबोट। नेपालको जिउँदो इतिहास। सुस्ताउँदै पत्रिका हेर्नेहरू छन्। भुइँमा र बारमा समेत टनाटन छन्, पत्रपत्रिका र साहित्यिक पुस्तकहरू। बास्ना नै साहित्यको आइरहेछ। बारमा झुन्डिइरहेको 'शिरीषको फूल'ले मलाई सुयोगवीर...	स्टुडियो नं १०शान्ति चाहना राख्दै क्यानभासमा भावना पस्कन सिपालु छन् कलाकार उमेश श्रेष्ठ। हिन्दु र बौद्ध दर्शनको प्रभाव बोकेर जीवन भोगाइलाई कलामा व्यक्त गर्छन उनी। जहाँ सुन्दर विम्ब र अद्भुत रंग संयोजन...	पुनर्निर्माण चुनौती: गाउँसहर कस्तो बनाउने?काठमाडौं– सत्तामा छँदा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेता एवं पूर्वमन्त्री प्रकाशचन्द्र लोहनीको घरमा कार्यकर्ताको भिड लागिरहन्थ्यो। उनी सबैका कुरा सुन्थे, सक्ने काम गरिदिन्थे। अहिले राजधानीको सुकेधारास्थित उनको घर प्राय सुनसान रहन्छ।...	नागरिक शनिबार	एउटा पुरानो छापामार'हान्ने राँगोजस्तै भएर आइस् नि? आँखा पनि राता न राता छन्! के भो तँलाई ए शंकर?'फलैँचामा...	दुइटा नाक भएका मान्छेम उनलाई सम्झाइरहेको थिएँ, छोरीको बिहामा फजुल खर्च गर्नु हुन्न।मेरो कुरामा सहमति जनाउँदै ती वुज्रुगले भने,...	मेरो रंगयात्रामा सर्वनामतीस–एकतीस सालतिरको धनकुटा। गोकुण्डेश्वर हाइस्कुलको सानो हलमा नियमित नाटक मञ्चन गर्थ्यौं। टिकटमा नाटक मञ्चन हुने परम्परा...	भाषिक अव्यवस्थाकुनै गलत कुरालाई धेरै पटक दोहोर्यािएर सत्य प्रमाणित गर्न खोज्ने प्रयासमा कतिपय मानिस लागिरहेका हुन्छन्। यहाँ...	भर्खरै...